I KDE izakufudukela kwi QtQuick ukuphucula ujongano lwexesha elizayo | ubunlog
I-KDE iqala ukufaka isoftware kwiQtQuick ukuphucula ujongano lwexesha elizayo, kunye nezinye izinto ezintsha ezihambele phambili namhlanje
IPablinux | 30/04/2022 11:58 | KDE, Ubuntu
kwiintsuku nje ezisixhenxe ezidlulileyo sishicilele inqaku leendaba elizayo KDE apho besithetha malunga nendlela abaza kuphucula ngayo ujongano kumanqaku afana nombala we-accent. Namhlanje, kwiveki kamva, sithetha ngento enye kwakhona, ngakumbi ukuba baqalise ukufuduka isoftware ukuya kwi-QtQuick ngenjongo yokuphucula ukuhambelana okubonakalayo kojongano lomsebenzisi, kunye nokwahlula ngcono amacandelo angaphakathi, ukwenza ikhowudi ibe yesimanjemanje. kunye "nokuphazamiseka" kwe-UI. Ukongeza, ubomi obuluncedo besoftware buya kwanda.
Ukuba inxalenye enye. Kwelinye icala, uNate Graham we KDE ubuyele ku iposti ixesha elide uluhlu lweendaba eya kufika ekuhambeni kwexesha, phakathi apho sine-tweaks yojongano olungaphezulu, imisebenzi emitsha kunye nokulungiswa kwebug. Kukho kwakhona uphuculo olungakumbi kwi-Wayland, kwaye mna oye wazama ukucinga ukuba, nangona isebenza kakuhle, isenokwaneleyo ukukwazi ukuyisebenzisa njengeyona ndlela iphambili ngaphandle kokukhathazeka.
1 Iimpazamo zemizuzu eyi-15
2 Amanqaku amatsha eza kwi KDE
3 Ukulungiswa kwamaphutha kunye nokuphuculwa kokusebenza
4 Ukuphuculwa konxibelelwano lomsebenzisi
5 Kuza nini konke oku kwi KDE?
Iimpazamo zemizuzu eyi-15
Uluhlu lwehle ukusuka kwi-73 ukuya kwi-70, kwaye ukulungiswa kule veki kuku:
Ezinye iimonitha azisekho rhoqo kwi-loop xa ziqhagamshelwe (Xaver Hugl, Plasma 5.24.5).
Nabani na unokutshintsha iintandokazi zabo emva kwi-Kickoff kunye ne-Kicker kwaye olo tshintsho luqhubekile emva kokuqalisa kwakhona i-Plasma okanye ikhompyutha (i-Méven Car, i-Plasma 5.24.5).
Emva kokufaka i-Flatpak app usebenzisa i-Discover, akusekho iqhosha elithi "Faka" elikhohlisayo apho kunjalo (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24.5).
Amanqaku amatsha eza kwi KDE
I-Skanpage ngoku ixhasa ukuthunyelwa ngaphandle kwee-PDF ezikhangelekayo kusetyenziswa ukuqondwa koonobumba be-optical (Alexander Stippich, Skanpage 22.08).
I-Dolphin ngoku ivumela ukuhlelwa ngokongezwa kwefayile ukuba kuyakhethwa (Eugene Popov, Dolphin 22.08).
Kwiseshoni yePlasma Wayland, ngoku kunokwenzeka ukuba utshintshe isisombululo sesikrini kwizigqibo ezingaphaya kwezo zixhaswa ngokusemthethweni, njengokuba unako kwiseshoni ye-X11 (Xaver Hugl, Plasma 5.25).
Ukulungiswa kwamaphutha kunye nokuphuculwa kokusebenza
Iqela lePhaneli yeTheminali yeDolphin ayisahambisani nembono ngokwayo (Felix Ernst, Dolphin 22.04.1).
Elisa's "Layisha uluhlu lokudlala ..." kunye "Gcina Uluhlu lokudlala..." izenzo ngoku zisebenza kwimenyu yehlabathi (Firlaev-Hans Fiete, Elisa 22.04.1).
Umbhalo wesixhobo sokukhanya seFayile awusanqunyulwanga ekupheleni (Harald Sitter, Filelight 22.08).
I-Plasma ayisayi kuphahlazeka ngokungenamkhethe xa unesicelo esingaphezulu kwesinye esineefestile ezininzi ezivulekileyo kwaye unxibelelane nenye yeengcebiso zoMphathi woMsebenzi (Fushan Wen, Plasma 5.24.5).
Kwiseshini yePlasma Wayland, i-KWin ayisayi kuntlitheka xa iimonitha ze-USB-C eziqhagamshelwe zivuka ukusuka kwiindawo zazo zokugcina amandla (Xaver Hugl, Plasma 5.24.5).
Iwijethi yemenyu yehlabathi ayisabonisi iimenyu eziphawulwe njengezifihliweyo yi-app, njengemenyu ye-"Tools" ye-Kolourpaint (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.24.5).
Kwiseshini yePlasma Wayland, i-KWin ayisayi kuntlitheka xa ivala ilaptop kwaye iphinda ivule xa isiboniso sayo sangaphakathi simiselwe ukucima ukuvala (Xaver Hugl, Plasma 5.25).
Kwiseshoni yePlasma Wayland, ilungiswe enye indlela i-KWin inokuphahlazeka xa ikhupha umboniso wangaphandle (Xaver Hugl, Plasma 5.25).
Ukuvala ifestile evelise "Fumana Entsha [Into]" ifestile yomntwana ngoku ivala ifestile yomntwana ngokunjalo, endaweni yokuyiyeka iqhubeke ikhona, kwaye ke isicelo somzali siyangqubeka okanye sinefestile engabonakaliyo engenakho ukuboniswa kwakhona de kube isicelo. iyasuswa kusetyenziswa iNkqubo Monitor okanye ifestile yesiphelo (Alexander Lohnau, Frameworks 5.94).
Kwisicelo esisebenzisa i-xdg-desktop-portals (umzekelo, i-Flatpak kunye ne-Snap izicelo), xa usebenzisa incoko yababini yefayile ukufikelela kwifayile kwindawo ekude enyuswe ngokuzenzekelayo kusetyenziswa i-kio-fuse phantsi kwehood, kwixesha elizayo vula ifayile yencoko yababini kwakhona, iya kuvula ibonisa indawo yoqobo, hayi indawo yakho yokunyuka yekio-fuse ekhangeleka ingaqhelekanga (Harald Sitter, Plasma 5.25).
Izicelo ezinjenge Konsole ezikuvumela ukuba ucwangcise udweliso lombala lwesiko kuyo yonke iwindow egqithisa udweliso lombala lwenkqubo olungagqibekanga ngoku lukhawuleza kakhulu ukuyindulula (Nicolas Fella, Frameworks 5.94).
I-KWin Scripts' i-KCM ifakwe kwi-QtQuick, iphucula inkangeleko yayo kwaye yenza lula ulondolozo lwexesha elizayo (Alexander Lohnau, Plasma 5.25).
I-Filelight ifakwe kwi-QtQuick, iphucula inkangeleko yayo kunye nokwenza lula ulondolozo lwexesha elizayo (Harald Sitter, Filelight 22.08).
I-wizard yokunika ingxelo yebug kaDrKonqi ifakwe kwi-QtQuick nayo (Harald Sitter, Plasma 5.25).
Kusetyenziso olusebenzisa i-xdg-desktop-portals, i-app switcher dialog ngoku ijongeka kwaye iziphatha ngcono (Nate Graham, Plasma 5.25).
Kwabo bangaluthandiyo utshintsho basoloko betsiba imisebenzi encinci xa beskrola kuMphathi woMsebenzi ukutshintshela imisebenzi, ngoku iyalungiseka (Abhijeet Viswa, Plasma 5.25).
Kuza nini konke oku kwi KDE?
IPlasma 5.24.5 iya kufika ngoLwesibini ozayo, ngoMeyi 3, kunye ne-Frameworks 5.94 ziya kufumaneka ngomhla we-14 kwaloo nyanga inye. I-Plasma 5.25 iya kufika kwangoko nge-14 kaJuni, kwaye i-KDE Gear 22.04.1 iya kuhlala nokulungiswa kwe-bug nge-12 kaMeyi. I-KDE Gear 22.08 ayikabinawo umhla omiselweyo omiselweyo.
Ukonwabela konke oku ngokukhawuleza kufuneka songeze indawo yokugcina izinto Iindawo ezingasemva Ukusuka kwi KDE okanye usebenzise indlela yokusebenza enendawo zokugcina ezinjenge KDE neon okanye naluphi na usasazo olunemodeli yophuhliso yiRollling Release.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE iqala ukufaka isoftware kwiQtQuick ukuphucula ujongano lwexesha elizayo, kunye nezinye izinto ezintsha ezihambele phambili namhlanje
I-Rsync 3.2.4 sele ikhutshwe kwaye ezi ziindaba zayo
I-GNOME isebenza kwizinto ezintsha ze-2D eziza kusebenza kwizikrini zokuchukumisa, kunye nokunye okutsha kule veki